Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone | IPhone nhau
Ignacio Sala | | IPhone nhau, Noticias
Vhiki rino rakaratidzirwa nekuve nenhau diki nezve Apple, chimwe chinhu chakajairika sekusvika kweKisimusi. Izvo zvatakataura zvakawanda nezvazvo zvave nhema Chishanu uye kubva kuActualidad iPhone yatinayo kukurumidza kuziviswa yenhau dzese uye zvinopihwa. Izvi zvinopihwa zvave zvisiri kungowanikwa chete kusvika Chishanu, asiwo muzviitiko zvakawanda, zviri kuwedzerwa kusvika mangwana, Muvhuro.
Pakati pemwedzi uno, akati wandei iwo ma tweaks akagadziridzwa kana kusvika Cydia. Mune Actualidad iPhone isu takagadzira muunganidzwa ane akanakisa tweaks ayo atove anowirirana neIOS 9. Vamwe vacho vanotipa mabasa akafanana nemamwe ma tweaks ayo nhasi haasati aenderana neIOS 9 sezvo zvinoita sekunge musimudziri asiya tweak. Isu takaburitsawo muunganidzwa ne 5 akanakisa echandoBoard madingindira unofanira kuedza.
Kutaura nezve inotevera iPhone, zvishoma nezvishoma pfungwa nyowani dziri kuoneka dzakabatana neyakatevera modhi iyo inotsiva yazvino iyi. Kunyanya, isu takakuratidza iwe mifananidzo ye iPhone 6k, iyo iPhone pfungwa ine yemuviri keyboard, iyo vazhinji vanoda BlackBerry vaigamuchira nemaoko maviri. Asi isu hatina kutaura chete nezvezvinhu vhiki ino, asi runyerekupe rwuri kutanga zvakare kutenderera icho chinoratidza izvo iyo inotevera iPhone 7 inogona kunge isina headphone jack.
Sezvo runyerekupe rwakatanga svondo rapfuura umo zvinonzi Apple iri kutogadzirira kugadzirwa kweApple Watch 2 nyowani, iyo chete nhau ine chekuita neyiyi mudziyo inotiratidza chidzidzo pane kushandiswa kunoitwa nevashandisi veApple Apple Watch.
Chekupedzisira kana uchitevera neBlack Frida, tinokuratidza rondedzero yekushandisa iyo ichave ichiwanikwa nechakakosha dhisikaundi kusvika nhasi Svondo. Kana iwe uchiri kusarudza, usatora nguva refu kana uchida kusevha maeuro mashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone
Maitiro ekugadzirisa "Kudzoreredza Isingawanikwe" muApp Store
Microsoft inotumira kukoka kwekutanga kuti vaedze Cortana paIOS